Snapchat Chaizvoizvo Ine Basa Kune Vatengesi? | Martech Zone
Izvo Snapchat Chaizvoizvo Ine Basa Kune Vatengesi?
Mugovera, Kukadzi 4, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Mune impromptu sarudzo munharaunda yedu yeMartech, 56% yevakabvunzwa vakati havana zvirongwa gore rino zvekushandisa Snapchat kushambadzira. 9% chete ndivo vakataura kuti vaiishandisa uye vamwe vese vakati havasati vasarudza. Izvo hazvisi chaizvo akamira ovation kune network iyo iri kukwirisa mukukura.
Ini pachangu, ndinoona zvichinetsa uye ndichiri kubatikana nguva dzese pandinovhura iyo app. Ini ndinopedzisira ndawana nyaya uye kubvaruka kubva kunetiweki yangu, asi kwete pasina kushushikana. Nezve kutumira zvinyorwa zvangu, ini ndaiwanzoita.
Iine mamirioni zana nemakumi mashanu evashandisi vanoshanda zuva nezuva uye 150% yavo vachitsikisa zuva nezuva, zvakadaro, pamwe ini handifanire kunge ndichiregeredza chikuva. Muchokwadi, pane chero zuva rakapihwa, Snapchat inosvika 60% yevose vane makore gumi nemasere kusvika makumi matatu nematatu mu Nyika dzakabatana.
Neshandisi-yega yekushandisa, Snapchat network inokodzera zvakakwana muhomwe yemumwe munhu. Iine auto-yakabviswa zvemukati, inopa vashandisi pfungwa yekukurumidzira kuti vawane Snapchat kazhinji sezvinobvira, uye inobatsira vashandisi kuramba vachikurukura neshamwari dzavo.
Kubata - Zvinoita sekunge zvinogona kuwana zvakati ome kubata uye kuyera kubatanidzwa, asi mukana wekuvaka 1: 1 hukama nevatengi vako unowanikwa paSnapchat. Uye vanhu vasina muganho vanogona kukutevera; iwe unogumira pakutevera zviuru zvitanhatu zveakaunzi (isina kusimbiswa neSnapchat)
Stories - Iyo Snapchat nyaya mufananidzo kana vhidhiyo iwe yaunotumira kune ako chaiwo nyaya chikamu chinoonekwa kwauri neshamwari dzako dzese. Nyaya dzinopera mumaawa makumi maviri nemana.
kushambadza - Snapchat inopa Snap Ads, Sponsored Geofilters, uye Sponsored Lenses mune yavo yazvino kushambadzira sarudzo.
3 Nzira dzekushambadza paSnapchat
Vatambi vanoona anopfuura mamirioni gumi emavhidhiyo pazuva, inova inopfuura 10% kuwedzera mugore rapfuura chete. Kushanya Snapchat Ads kune rumwe ruzivo uye tani yezviitiko zvidzidzo.
Shandisa Ads - ari gumi-echipiri akamira evhidhiyo kushambadzira.
Vanotsigirwa maGeofilters - akasiyana mafirita emifananidzo anongowanikwa munzvimbo dzaunotsanangura.
Sponsored Lenses - ndeekugadziriswa kwemifananidzo kana zvidimbu izvo vashandisi vanogona kutamba nazvo uye nekuwedzera kune avo Anonhonga.
Maitiro akanakisa pane kushambadzira kweSnapchat
Gadza yako Snapchat mbiri ku ruzhinji rwevanhu.
Gadzirisa yako Snapcode.
Shandisa Snapchat kumakwikwi, sneak peeks, coupon kodhi, kuseri kwezviitiko, uye sumo dzevashandi.
Tora kwemasekonzi 5-15 uye gadzira nyaya dziri 1-2 maminetsi.
Taura panguva yako snap kana nyaya.
Firimu uye tumira zvimiro zvemifananidzo
Taura nevamwe vashandisi uchishandisa mutumwa waSnapchat.
Shandisa zvinyorwa uye emojis
Heano infographic, Nei Snapchat Nyaya dzeKushambadzira:
Tags: emojigeofilterssnap adssnapchatsnapchat tsvagasnapchat kushambadzirasnapchat messengersnapcodekubvuta nyayalenzi dzinotsigirwataco bell lensewebpagefx
Kukadzi 5, 2017 na5: 14 PM
Zvinoenderana neazvino data, Snap (chat) ine vashandisi ve158M DAU. Muchokwadi, iyi nharembozha inotarisana nemusika wekuMadokero: North America (US, Canada) uye (pamwe) Europe (UK, FR). Handifunge kuti "Nemamirioni zana nemakumi mashanu evashandisi vanoshanda mazuva ese uye 150% yavo vari kutsikisa zuva nezuva" hazvina kunaka. Vanhu vazhinji vanoshandisa Snap (kutaura) kuitira kuti vatevere zvimwe zvisina basa pasina kutumira nyaya.
Feb 8, 2017 at 9:49 PM
Ndinoona zvisinganetsi kushandisa uye kazhinji kusara ndichinetseka kuti "ndinofanira kutumira chii?" usati watamira ku Instagram kana kudzokera kuFacebook. Zve bhizinesi zvakasiyana zvishoma, nekuti kana iwe wakatsanangura yako meseji, ingori nyaya yekuchinjisa kuchikuva uye kutamba pamwe kuti chishande asi ichiri isinganzwisisike network kushandisa. Tichaona zvavanoita mushure meIPO yavo.